लगातार उकालो लाग्दै सुनको भाउ, चाँदीमा पनि उछाल कायमै
काठमाण्डौ । यो साता लगातार तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार पनि सुनको भाउमा बढोत्तरी भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामै ९०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सोमबार पनि सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको...
आज पनि सुनको भाउ उकालो लाग्यो, चाँदीमा पनि बढोत्तरी
काठमाण्डौ । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार पनि सुनको भाउमा बढोत्तरी आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँको बढोत्तरी भएको हो। यो वृद्धिसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो पनि सुनको भाउमा ३०० रुपैयाँको बढोत्तरी भएको थियो। हिजो...
आज सुनको भाउ बढ्यो, चाँदीको मूल्य स्थिर
काठमाण्डौ । गत साता लगातार घटेको सुनको भाउ यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउमा ७००...
सुनको भाउमा लगातारको गिरावटमा ब्रेक, आज कति बढ्यो ?
काठमाण्डौ। लगातार घटिरहेको सुनको भाउ बिहीबार बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ८०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार १०० रुपैयाँ पुगेको छ। हिजो बुधबार तोलामा ४०० रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड...
सुनको भाउ लगातार खस्किँदै, चाँदीमा पनि उस्तै
काठमाण्डौ । सुनको भाउमा आज बुधबार पनि गिरावट आएको छ। यो साता लगातार चौथो दिनसम्म सुनको भाउमा गिरावट आएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँग आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मंगलबार पनि सुनको भाउ तोलामा...
सुनको भाउमा लगातार गिरावट
काठमाण्डौ । सुनको भाउ लगातार भइरहेको गिरवाटले आज मंगलबार पनि निरन्तरता पाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामै ७०० रुपैयाँको गिरावट आएको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सोमबार पनि सुनको भाउमा ५०० रुपैयाँको गिरावट आएको...
आज पनि घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पर्ला ?
काठमाण्डौ । साताको कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार पनि सुनको भाउ ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले गिरावट आएको हो। यो गिरावटसँगै प्रतितोला फाइन सुन ९७ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो आइतबार पनि सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको थियो। यो दिन...
सुन–चाँदीको भाउ आज घट्यो, तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउमा तोलामा ४०० रुपैयाँ गिरावट आएको हो। यो गिरावटसँगै प्रतितोला फाइन सुन ९८ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन सुनको भाउ स्थिर रहँदै प्रतितोला फाइन...
आज तीजको दिन सुनको भाउ कति ?
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार अनि महिलाको महान चाड हरितालिका तीजका दिन सुनको भाउ स्थिर बन्न पुगेको छ। आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ८७ हजार ३०० रुपैयाँ नै कायम भएको छ। हिजो बिहीबार तोलामै १ हजार ६०० रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९८ हजार ३०० रुपैयाँ कायम...
आज सुनको भाउमा पहिरो, तोलामै रु. १६ सय घट्यो
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको पाँचौँ दिन बिहीबार सुनको भाउमा भारी गिरावट आएको छ। आज सुनको भाउ तोलामै १ हजार ६०० रुपैयाँको गिरावट आएको हो। यो गिरावटसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९८ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो बुधबार सुनको भाउ स्थिर रहँदै प्रतितोला फाइन...
सुनको भाउमा फेरि उछाल, चाँदीमा उस्तै
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको सुरुआती २ दिन लगातार घटेको सुनको भाउमा तेस्रो दिन मंगलबार पुनः उछाल आएको छ। आज सुनको भाउ तोलामै २ हजार २०० रुपैयाँले बढेको भएको हो। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड १ लाख ४०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९९ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँको...
आज पनि घट्यो सुन–चाँदीको भाउ
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार पनि सुनको भाउमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँको गिरावट आएको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार २०० रुपैयाँ तेजाबी गोल्ड ९७ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार पनि सुनको भाउ तोलामा २००...
सुनको भाउमा सामान्य गिरावट, आज कति ?
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ थोरै गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको छ। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत साता कारोबारको अन्तिम दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार ६००...
आज पनि सुनको भाउ बढ्यो, कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार पनि सुनको भाउ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ८०० रुपैयाँ बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९८ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ। लगातार चार दिनको गिरावटपछि हिजो बिहीबार सुनको भाउ तोलामै २ हजार ४०० बढेको...